Xoogagga Ciraaq oo Kurdiyiinta dhul ka qabsaday - BBC News Somali
Xoogagga Ciraaq oo Kurdiyiinta dhul ka qabsaday
Xoogagga xukuumadda ciraaq ayaa sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta dhulal dheeraad ah oo la isku haystay, kuwaasoo hore ugu jiray gacanta xoogagga Kurdiyiinta.
Image caption Xoogagga ciraaq oo dhul ka qabsaday Kurdiyiinta
Goobo ku yaalla gobolka Nynwa oo uu ku jiro biyo xireenka Moosil ayaa waxaa qabsaday dagaallamayaasha Kurdiyiinta ee loo yaqaanno Peshmerga seddexdii sano ee la soo dhaafay, intii uu socday dagaalkii lagula jiray kooxda la magac baxday dawladda islaamiga.
Horraantii todobaadkan ayaa milateri, boolis, iyo ciidamo si gaar ah u tababaran waxay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Kirkuk iyo ceelasha saliidda ee u dhow.
Hawlgalka ayaa yimid todobaadyo ka dib markii Kurdiyiintu ay qabteen afti.
Codbixiyeyaasha gobolka isagu ismaamula ee Kurdstan iyo dhulalka lagu muransan yahay ee ay gacanta ku hayeen Peshmerga ayaa dadku waxay si weyn u taageereen go'itaan, laakin cod bixintaas waxaa sharci darro ku tilmaamay xukuumadda dhexe ee ay carabtu hogaamiso ee Baqdaad.
Ra'iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabaadi ayaa markaas ka dib amar ku bixiyey in lala wareego dhamaanba deegaannada ay wada sheeganayeen xukuumadiisa iyo maamulayaasha Kurdiyiinta.
Talaadadii ayaa madaxweyne goboleedka Kurdiyiinta Mascuud Barzani wuxuu ku baaqay nabad, wuxuuna wacad ku maray inuu ka shaqayn doono madaxbanaanida Kurdiyiinta.
Wuxuu eedeyn dusha kaga tuuray siyaasiyiinta Kurdiyiinta oo uu ku eedeeyey in isqabqabsigooda dartiis ay Kirkuk gacanta uga baxday.
Maxay Kirkuk xuddun ugu tahay dhibaatada?
Kirkuk waa gobol hodan ku ah saliidda, ceelasheeda saliiddana waxay muhiim u yihiin dhaqaalaha Kurdiyiinta. Waxay ku taallaa meel dibadda ka ah dhulka rasmi ahaan loo yaqaanno gobolka Kurdstan, waxaase wada sheegta Kurdiyiinta iyo xukuumadda dhexe labadaba.
Waxaa la fahamsan yahay in Kurdiyiintu ay halkaa ku badan yihiin, laakinse xarun goboleedkooda ay ku nool yihiin tiro badan oo carab iyo Turkmen ah.
Xoogagga Kurdiyiinta ee Peshmerga waxay la wareegeen gacan ku haynta inta badan gobolkaas 2014, markii kooxda IS ay cagta mariyeen waqooyiga ciraaq, milaterigii dalkaasna uu burburay.
Talaadadii ayey ciidanka Ciraaqiyiinta gacanta ku dhigeen Bai Xasan iyo Avana oo ah meelo saliidda laga soo saaro oo ku yaalla waqooyiga Kirkuk, waxaana gacanta ku haya shirkadda ay dawladdu maamusho ee North Oil Company.
Maalin ka hor, askartu waxay qabsadeen xarumo kale oo ah kuwo militari iyo qaar saliidda laga soo saaro, iyo sidoo kale xafiiskii barasaabka. Xoogaggu waxay dhulka soo dhigeen sida ay wararku sheegayeen calanka Kurdiyiinta oo ka dhinac babanayey kan waddanka ciraaq.
Peshmerga waxay markaa ka dib ka baxeen magaalooyin kale oo ay ku jiraan Khanaqin iyo Jalawla oo ka tirsan gobolka Diyala, iyo Makhmour, Bashiqa, Sinjar iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Nynwa, sida lagu sheegay qoraal uu soo saaray milateriga Ciraaq.